MISS JEUNESSE MADAGASCAR: Tovovavy 16 taona no nahazo ny voalohany. | Canalnews Madagascar
Home A LA UNE MISS JEUNESSE MADAGASCAR: Tovovavy 16 taona no nahazo ny voalohany.
A LA UNEACTUALITECULTURESOCIAL
MISS JEUNESSE MADAGASCAR: Tovovavy 16 taona no nahazo ny voalohany.
By Nirinaaoût 25, 2017, 05:08 0
Fiantohana ny fianarana eny ambaratonga ambony mandritra ny telo taona no loka no nomena ny Miss Jeunesse Madagascar, Daniela Fandresena RAZAFIMAHALEO. Tovovavy 16 taona avy Fandriana no nandrombaka ny laharana voalohany tamin’ny fifantenana ny Miss Jeunesse Madagascar izay handray anjara amin’ny Miss Jeunesse World amin’ny 2018.
Ankoatra ny fanampiana azy amin’ny lafiny fianarana, hanampy amin’ny fanatanterahana ny tetikasany dia ny fanaovana asa soa sy ny fanentanana ny tanora miaina amin’ny zava-mahadomelina sy ny ditra ny komity mpikarakara avy eto an-toerana sy ny any ivelany.
Toby mitaiza zaza kamboty maromaro no notsidihan’ny Andriambavilanitra Daniela, niaraka tamin’ny Miss Jeunesse World, Jennifer Massicot.
Nambaran’ny mpikaraka ny Miss Jeunesse Madagascar, Hary Yvette fa voalohany Madagasikara no nandray anjara tamin’ity fifaninana ity.
Marihina ny fahitalavitra KOLO no nanolotra ny vatsim-pianarana ho an’i Daniela ary ny komity ny Miss Jeuness World kosa no hiantoka ny diany hanatrika ny fifantenana ny Miss Jeunesse Frantsa .
Previous PostALLIANCE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE: Manampy ny tanora mba hanana asa. Next PostCEINTURE VERTE: Mampianatra momba ny fikarakarana voninkazo.